☀Casa Shekina ipharadesi elishisayo
Puerto San José, Escuintla, i-Guatemala
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Gemima
U-Gemima uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
Casa Shekina "La Presencia de Dios" kuyinto endlini enhle e Puerto San Jose ephelele yokubaleka ngempelasonto, ukuchitha isikhathi nomkhaya wakho noma abangani, noma ukuze nje ajabulele kwezinsuku ezimbalwa sezulu emnandi amahora ambalwa kusukela enhloko-dolobha. Inegumbi lokuphumula, igumbi lokudlela, ikhishi, amagumbi okulala angu-3, amagumbi okugezela angu-3 agcwele, i-pool yangasese, i-barbecue grill, i-A / C kuwo wonke amagumbi, ipulazi elingaphandle nendawo yokupaka izimoto ezi-4.
Amandla abantu abayi-10 (ubuningi obungu-12, okuhlanganisa nezingane), AYISEKHO IZIVAKASHI ABEZINGASAMUKELWA.
I-Casa Shekina inegumbi lokuhlala eline-A / C, imidlalo yebhodi, igumbi lokudlela labantu abangu-10, itafula lasekuseni labantu abangu-4, ikhishi elihlome ngokuphelele elinakho konke okudingayo kanye no-A / C.
o Igumbi #1
• Umbhede ongusayizi wenkosi ongu-1
• 1 umbhede usofa
• Igumbi lokugezela eli-1 eligcwele
• Amandla abantu aba-4
o Igumbi #2
• 1 umbhede ophindwe kabili
• Ibhedi e-1
o Igumbi #3
• Imibhede emi-2 ephindwe kabili
Amandla abantu abayi-10-12 kuhlanganisa nezingane
Beach imizuzu engu-10 ukuhamba
Ngena: 13:00 hr
NgeSonto Lokungena NgeSonto: 16:00 hr
Ukuphuma: 12:00 hr
Ngokufika kwakho ungasebenzisa imigwaqo eminingana, indawo iseChulamar, Calle Lindamar, Colonia Iguana la Laguna. Indlu isendaweni ephephe kakhulu futhi eyimfihlo, eduze kakhulu nezitolo ezingomakhelwane kanye ne-super 24 ukuthenga.
Izivakashi zingangithinta nganoma isiphi isikhathi ngesikhathi sokuhlala kwazo futhi ngizokujabulela ukuphendula yonke imibuzo yazo futhi ngizisize nganoma yini eziyifunayo, zingangishayela ucingo noma zingithumelele umlayezo ngale ndlela noma nge-WhatsApp.
Izivakashi zingangithinta nganoma isiphi isikhathi ngesikhathi sokuhlala kwazo futhi ngizokujabulela ukuphendula yonke imibuzo yazo futhi ngizisize nganoma yini eziyifunayo, zingan…
UGemima Ungumbungazi ovelele